Krizy sosialy : ezahina akorontana koa ny FLM ? | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Krizy sosialy : ezahina akorontana koa ny FLM ?
Efa volana maromaro izao no naharenesana ny olana anaty eo anivon'ny Fiangonana Loterana Malagasy. Indrindra ny sinodam-parintany Antanananarivo renivohitra. Araka ny fampitam-baovao manko dia toa misy famindran-toerana tsy ara-drariny atao amin'ireo Pastora sasantsasany ato an-drenivohitra sy ny manodidina. Miteraka korontana eo amin'ny samy kristiana anefa izany satria maro an'isa no tsy mankato ary mijoro hanohitra ny "teny midina" ampiharina amin'ny fifampitondrana. Ny antotan-taratasy toy izay zaraina amintsika etsy ambany dia tokony ho feon-dakolosy fanairana ho an'ny Kristianina sy ny Mpitondra fivavahana rehetra ihany koa satria, indrindra amin'ny fotoan-tsarotra lalovan'ny Firenena toa izao, dia ny Finoana no hany sisa azon'ny rehetra amikirana mba tsy ho zakan'ny fahaverezana.
Ka raha sanatria "ny antenain-kanirina no mivandravandra" dia azo saintsainina ny mety hiafaran'i Madagasikara. Raha ny fanantenan'ny Malagasy maro an'isa dia modelin'ny fifampihavanana ny Fiangonana Kristianina ary efa im-betsaka no niantso azy ireo hitarika izany ny vahoaka satria mbola mino fa tsy tompon'ny fikitranana izay miorina amin'ny Finoana. Adidy iantsorohan'ny mpitondra fivavahana arak'izany ny tsy mandraraka ilo mby an-doha mba tsy hiverina amin'ny fanompoana sarivongana ny mpiray tanindrazana.
Fanambaranny_solontenanireo_mpandray_flm.pdf 173.97 Ko
Fanambarana_iraisanireo_pastora_23.pdf 211.86 Ko